‘सेन्ट छरिएको लभ लेटर पनि आयो’-सिम्रन खड्का – Fursad Nepal
November 5, 2017	Events/Misc., Featured, Interview, Models 2,046 Views
दक्षिण कोरियाको सोल शहरमा हाले आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मोडलिङ अवार्ड ‘ब्राइडल अवार्ड २०१७’ मा चौथो स्थान हासिल गर्ने नेपाली चेली हुन् सिम्रन खड्का । यो अवार्डमा उनले १९ देशका प्रतियोगी मोडललाई पछि पार्दै चौथो स्थानमा आएकी हुन् । उपाधिका साथमा ५० लाख कोरियान वन र मेडल समेत जित्न सफल उनी नेपालकै चर्चित सौन्दर्य प्रतियोगीता मोडल हन्ट नेपालको यसै बर्षकी फष्टरनर अफ बिजेता पनि हुन् । कोरियाको अवार्डमा उपाधी विजेता बनेपछि विभिन्न अवसरको ढोका खुलेको बताउने उनलाई नाम चलेका केही निर्माताले चलचित्र अभिनय अफर समेत दिएका छन् । अभिनयमा हाम फालिहाल्ने सोच आफ्नो अहिले नभएको उनले बताइन् । यी नै सिम्रनसँग यस्तो छ दश प्रश्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगीता जितेर फर्किनु भएको छ । प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
– चारै तिरबाट तारिफ पाइरहेकी छु । आफूले कल्पना नगरेको उपलब्धी हात पर्दा उत्साहित पनि छु । अर्काे कुरो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जान पाए यो नै मेरा लागि ठूलो गौरवको विषय हो ।
फेसनबारे के भन्नुहुन्छ ?
मन परेको चलचित्र ?
– हलिउड फिल्म ‘होटेल फर डग’ मन परेको छ । जनावर तिर धेरै रुचि भएकोले पनि यो चलचित्र मन परेको हो ।
– चाँडो रिसाउने बानी छ । यो नै मेरो खराब बानी हो । मलाई पनि थाहा । घरमा मम्मीले पनि यही भन्नुहुन्छ । यो बानी सुधार्न खोज्छु, सक्दै सक्दिन ।
nepali model simran simran khadka	2017-11-05
Tags nepali model simran simran khadka
Previous कलेज सुन्दरीको एयर होस्टेस बन्ने सपना
Next साउथ एसिया वृत्तचित्र महोत्सव हुँदै